Izindaba - Zhejiang Lijiu Motor Co., Ltd.
IE1 Isigaba sesithathu semoto esine-asynchronous
IE2 Isigaba sesithathu semoto esine-asynchronous
IE3 Isigaba sesithathu semoto esine-asynchronous
Igobolondo le-MS Aluminium isigaba sesithathu se-asynchronous motor
Imoto ejwayelekile yaseRussia (Amandla Amancane Base Base)
Isigaba esine-motor asynchronous for gear reducer
Isigaba esine-motor asynchronous sepompo yepayipi
Isigaba esine-motor asynchronous semishini yamatshe nemishini yokubaza
I-asynchronous motor-selehlile ngamanzi isigaba sesithathu
YB3 Flameproof ezintathu isigaba motor asynchronous
I-YD2 Multi-Stage Variable Speed ​​Isigaba Esithathu se-Asynchronous Motor
I-YEJ2 i-Electromagnetic Braking Brase-Phase Asynchronous Motor
Isivinini semvamisa eguquguqukayo ye-YVP isigaba sesithathu se-asynchronous motor
I-YXP motor yesigaba esine-asynchronous yokulwa nomlilo okushisa okuphezulu nokubhema umusi
I-Cooling Tower Motor
Zhejiang Lijiu Motor Co., Ltd.
IZhejiang Lijiu Motor Co, Ltd. (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi "iZhejiang Lijiu Motor") itholakala eTaizhou, Zhejiang, lapho kuzalwa khona umnotho wangasese. Ngokuncika esiyingini esikhulu sezomnotho seYangtze River Delta, indawo ezungezile iphakeme. Kungamakhilomitha ama-2 kuphela ukusuka eThaizhou Airport namakhilomitha ayi-10 ukusuka eHaimen Port. Ukuthuthwa kwamanzi, umhlaba nomoya kulula kakhulu. Ngethimba lobuholi elisha, uhlelo lokuphatha lwanamuhla, abasebenzi abasezingeni eliphakeme, izindawo zokukhiqiza eziphelele, imishini yokuhlola ephelele, amandla amakhulu ezobuchwepheshe, ikhwalithi yomkhiqizo onokwethenjelwa, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuhle kakhulu, uhlelo oluphelele lwekhwalithi, oluthuthukile Ngamandla we-R & D kanye neqembu lokuthengisa elisebenza kahle, iZhejiang ILijiu Motor isheshe yaba yinkanyezi ekhulayo embonini yezimoto eChina. Inethiwekhi yokuthengisa isabalale yaya ezifundazweni nasemadolobheni angaphezu kwama-20 eNortheast, Northwest, North China, Central China, South China, Southwest nase East China. Isithombe somkhiqizo besigxile kakhulu ezinhliziyweni zabantu, futhi sathola umusa nodumo lwabathengisi abahlukahlukene.
Zhejiang Lijiu Motor is ezikhethekile yokukhiqiza, R & D kanye yokuthengisa izinjini ezahlukene. Imikhiqizo ifaka i-YE2, YE3, YB3, izinjini ezikhethekile zemibhoshongo yokupholisa, i-YD2, i-YEJ2, i-YVF2, ama-motors apholile ngamanzi, amagobolondo e-MS aluminium, ama-motors akhethekile wamaphampu wamaphayiphi, kanye nochungechunge oluhlukahlukene lwam motors we-asynchronous wezigaba ezintathu namanye ama-motors akhethekile atholakele kubo. Umkhiqizo usebenzisa ukwakheka okujwayelekile kukazwelonke, futhi izinga lamandla nosayizi wokufaka lihambisana nezinga le-IEC le-International Electrotechnical Commission. Inezinzuzo zokusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla, i-torque ephezulu yokuqala, umsindo ophansi, ukudlidliza okuphansi nokwethenjelwa okuphezulu. Imikhiqizo isidlulile isitifiketi se-European Union's CE kanye nesitifiketi se-CCC ne-CQC saseChina. Le nkampani ithole isitifiketi sohlelo lwekhwalithi lomhlaba wonke le-ISO9001. I-Zhejiang Lijiu Motor izinikele ekuhlinzekeni izixazululo ezihamba phambili zabasebenzisi bezimboni namandla, ukwenza ngezifiso izinjini ezikhethekile.
Ukuqamba nobuqotho kuyinkambiso yami, ukuzivumelanisa nezimo nokuguquguquka kuyizinzuzo zethu. Sihlose ukuba ngummeleli we- "Made in China" emkhakheni wezimoto. Inkampani inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yokuphatha ngobuqotho nokuwina ngekhwalithi", futhi ukuze ihlangabezane nezidingo zabathengisi basekhaya nabangaphandle, izama ukwakha "Ukuhola"brand, ukuze"Ukuhola"idume ezweni lonke nasemhlabeni. Sebenzisa ubuqotho nokuhlakanipha kwethu ukwenza ikusasa elingcono lihambisane nawe!
Abagibeli, themba abantu abaseduze kwakho
Ubuchwepheshe buhola inqubekela phambili yesikhathi eside
Insiza 360 °
Ukubamba iqhaza okusondele futhi okunomdlandla
Qhubeka nokwenza okusha
Zhejiang Lijiu Mission
Gxila ekwakhiweni kwezimoto eziphephile nezisebenza kahle futhi wakhe inani labo bonke ababambiqhaza.
Umbono weZhejiang Lijiu
Thuthukisa isithombe sezimboni zezimoto zaseChina, kuhloswe ukuba ngummeleli we "Made in China" emkhakheni wezimoto.
Isikhathi Iposi: Oct-15-2020
IShangsiqian Industrial Park, iLuoyang, iLuqiao, iTaizhou Zhejiang China